“Diyaar ayaan u nahay in AC.Milan aan ku garaacno Super Cup-ka” – Giorgio Chiellini – Gool FM
“Diyaar ayaan u nahay in AC.Milan aan ku garaacno Super Cup-ka” – Giorgio Chiellini
Liibaan Fantastic December 21, 2016
(Doha) 21 Dis 2016 Daafaca kooxda Juventus ee Giorgio Chiellini ayaa ka hadlay kulanka adag ee kooxdiisu ay wajihi doonto jimcaha kooxda AC.Milan.
Juventus iyo Milan ayaa ku balansan Super Cup-ka talyaaniga kaas oo lagu ciyaari doono caasimada Qatar ee Doha Jimcaha.
Giorgio Chiellini ayaa sheegay in kooxdiisu ay diyaar u tahay inay guul ka gaarto dhigeeda AC.Milan, wuxuuna dib u xusuustay guul daradii ka soo gaartay dhanka horyaalka markaas oo Milan ay ku adkaatay 1-0.
“Diyaar ayaan u nahay kulanka, waxaan doonaynaa inaan guulaysano oo aan hanano koobka si aan dib ugula soo laabano talyaaniga” ayuu u sheegay saxaafada ka hor ciyaarta.
“Guul daradii naga soo gaartay Milan ee horyaalka ma ahan mid laga qiyaas qaadan karo, sababta guul daradaas ayaa ah in kooxdu ay ciyaarayso xiliciyaareedkii 60 kulan, waana wax iska caadi ah in dib u dhac uu soo wajaho qaab ciyaareedkeena”.